Ukubuka okumangalisayo kwe-fjord nezintaba ezicwebezelayo Birdbox - I-Airbnb
Ukubuka okumangalisayo kwe-fjord nezintaba ezicwebezelayo Birdbox
Forde, Vestland fylke, i-Norway
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Torstein
U-Torstein Ungumbungazi ovelele
Phumula, uvuselele futhi ukhulule kuleli bhokisi lezinyoni lesimanje eliyingqayizivele. Zizwe useduze nemvelo unethezeke kakhulu. Jabulela ukubuka intaba enhle yase-Blegja ne-Førdefjord. Yizwa ukuzola kwangempela kwasemaphandleni ase-Norway kwezinyoni eziphithizelayo, imifula egeleza kanye nezihlahla emoyeni. Hlola indawo yasemaphandleni, wehle uye e-fjord bese ubhukuda, qwala izintaba ezizungezile, uphumule ngencwadi enhle futhi ucabangisise. Jabulela okokuzithokozisa okuyingqayizivele kwebhokisi lezinyoni.
Iklanywe ngu- @ TorsteinAaDesign (insta)
I-Birdbox itholakala eFauske imizuzu eyi-15 entshonalanga ukusuka e-Førde ubheke e-Askvoll entshonalanga ne-norway, epulazini elincane elidala elisentabeni. I-Birdbox iwuhambo lwama-200m ukusuka egcekeni lepulazi, eduze nengobo endala yasehlobo.
ISAZISO ESIBALULEKILE: I-Birdbox itholakala imizuzu eyi-15 ukusuka e-FØRDE, cishe. Amahora angu-3 enyakatho yeBergen.
Nakuba kunombhede owodwa kuphela, ulinganisa u-220cm ububanzi no-200cm ubude futhi ungahlala kalula abantu abangu-3 noma abadala abangu-2 kanye nezingane ezimbili.
Kukhona indawo yokupaka egcekeni lepulazi uma ufika ngemoto.
Kunendlu yokugezela encane eyakhiwe esibayeni esidala sasehlobo eduze nebhokisi lezinyoni elalivamise ukufuya izinkomo zobisi ezinyangeni zasehlobo.
Ibhasi elisuka eFørde
Kukhona ibhasi elisuka eførde, xhumana nami ngolwazi uma uludinga.
Isitolo segrosa esiseduzane sise-Førde, ngakho qiniseka ukuthi uletha okudingayo uma uya ku-Birdbox.
IFauske iyindawo ezolile yasemaphandleni enemvelo nxazonke, ukubukwa okuhle kwezintaba kanye ne-fjord.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nami nganoma imiphi imibuzo :)
Udadewethu uhlala epulazini futhi uvame ukutholakala uma engekho emsebenzini esibhedlela.
UTorstein Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Forde namaphethelo